I-Hilltop Heaven--5 Star Comfort and Views!
Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguDoug
Isishwankathelo: Eli khaya leenkwenkwezi ezi-5 lolona khetho lufanelekileyo lokuhlala kwakho kwenye yezona ndawo zintle eUtah! Ngemizuzu engama-20 kuphela yokuqhuba kwiRed Canyon ukuya ekungeneni kweBryce Canyon National Park kunye nemizuzu engama-50 ukuya eZion National Park ujikelezwe yimisebenzi yangaphandle engapheliyo (ukuhamba intaba, ukukhwela ibhayisekile, ukuloba, ukufota izilwanyana zasendle, iATV kunye nokukhwela amahashe) kunye neendawo ezimangalisayo ezimangalisayo. Umnini unokucebisa imisebenzi (unezibhayisekile ze-mtn ezikhoyo- bona iifoto) ukuqinisekisa iholide yobomi bonke!
Ikhaya: Ubuhle kunye nentuthuzelo yekhaya ihambelana noxolo olujikelezileyo kunye nembonakalo yendawo encochoyi yenduli. Indawo ebanzi ye-1500 sq. unyawo ekhaya kunye neendawo ezintle zokuhlanganisa ngaphakathi nangaphandle. Ngobusuku obupholileyo hlanganisana kufuphi neziko kwigumbi elikhulu losapho okanye kwindawo yokucima umlilo ekwidesika. Yonwabela ikofu yasekuseni kwipatio okanye ngorhatya oluzolileyo lwasehlotyeni yiba neglasi yewayini kwipatio kwaye ubukele ukutshona kwelanga. Yosa isidlo sakho kwi-Blackstone gas flattop. Emva kosuku olupheleleyo ngaphandle wonwabe udlala iping pong, fooseball, cornhole, nokunye kwigumbi lomdlalo/igumbi lebhonasi. Ikhaya linekhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo, i-air-conditioning, ingqokelela yeglasi enkulu yebar, imibala yangaphakathi enomdla, ukukhanya, kunye noyilo. Okona kubaluleke kakhulu, iibhedi ezitofotofo kunye nazo zonke iindawo zicoceke ngokugqibeleleyo.
Indawo: Eli khaya lirenta ngokukhawuleza ngenxa yendawo ekuyo-kwinduli ezolileyo ejonge idolophu yaseNorman Rockwellesque yasePanguitch enembono yeentaba kumacala onke- ukwenza ukuphuma kwelanga KUNYE nokutshona kwelanga kufuneka wenze imisebenzi. Uninzi lweendwendwe zikhetha eli khaya ngokuba kufutshane neBryce Canyon National Park kunye neZions National Park. Kodwa, abaninzi bahlala kwiihambo ezimfutshane kwenye yezona ndlela zibalaseleyo zaseMelika Umzila we-12 ukufikelela kwiiPaki ze-Utah State (i-Kodachrome, i-Anasazi, kunye ne-Escalante) zonke ziyamangalisa ngokulinganayo kwaye zizodwa njengeepaki zelizwe. Abanye bachitha usuku bekhwele isikhephe okanye beloba kwi-1400 yeehektare eziphakamileyo zokuphakama kweLake iPanguitch okanye beloba kwimilambo enexabiso eliphezulu elingenasiphelo kunye nemisinga kwindawo leyo.
Uluhlu lubonisa amagumbi amaBINI okulala - kodwa igumbi le-BONUS/UMDLALO lineebhedi zokulala zeendwendwe ezi-3 ezongezelelweyo. Igumbi loSapho nalo linendawo yokulala yesofa yobukhulu bokumkanikazi.
4.91 ·Izimvo eziyi-139
4.91 · Izimvo eziyi-139
Ndifowunelwa okanye ndithumele umyalezo ngaphandle. Ngamanye amaxesha ndihlala kwipropathi kodwa ndiyazama ukuba ungabonakali kwaye ndikunike imfihlo. Ndikwajonga nemiyalezo yakwa-Airbnb ndize ndiphendule ngokukhawuleza.